Top 10 lăn khử mùi dành cho nam loại nào tốt nhất hiện nay | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: Top 10 lăn khử mùi dành cho nam loại nào tốt nhất hiện nay | Muasalebang in Muasalebang
“Ukuvuvukala kwamaphiko” ukwesaba wonke umuntu, ikakhulukazi amadoda. Ukujuluka ngokweqile emakhwapheni, kudala iphunga elithi “obsessed” akusaxaki uma sisemahhovisi, emgwaqeni noma sisebhasini. Ngalesi sikhathi i-deodorant roll yamadoda yinsindiso yabantu.
1 Indlela yokukhetha i-deodorant roll yamadoda ephumelelayo
2 Amarola angama-deodorant ayi-10 aphezulu adume kakhulu namuhla
2.1 1. I-Nivea Premium Men’s Deodorant Roller
2.2 2. I-Rexona Men’s Deodorant Roller
2.3 3. I-Xmen .I-Deodorant Roller Yamadoda
2.4 4. I-AX
2.5 5. I-Romano deodorant roll yamadoda
2.6 6. Enliven Men sika Deodorant Roller
2.7 7. I-Etiaxil Men’s Deodorant Roller
2.8 8. I-Deodorant Yamadoda E-Iroman
2.9 9. I-Garnier Men’s Deodorant
2.10 10. UCalvin Klein (CK) I-Deodorant Roller
3 Ungayisebenzisa kanjani kahle i-roller yesiqedaphunga sowesilisa
Indlela yokukhetha i-deodorant roll yamadoda ephumelelayo
Ngokuvumelana negama layo, i-roller yesiqedaphunga samadoda inenhloso eyinhloko yokuqeda iphunga. Lena indlela eshesha kakhulu, elula futhi ephephe kunazo zonke namuhla yokuxazulula inkinga yephunga lomzimba. Kodwa ukukhetha i-roller efanele yesiqedaphunga samadoda, kufanele uqonde izithako, ukusetshenziswa komkhiqizo kanye nezici zomzimba wakho ukuze udale ukusebenza kahle okukhulu.
Kunezinhlobo eziningi zamarola esiqedaphunga esidala emakethe, kodwa yonke le mikhiqizo esemqoka iwela emigqeni emibili emikhulu:
Enye ngeyabantu abajuluka kakhulu kodwa abangenalo iphunga. Lolu hlobo lusiza ukunciphisa ukujuluka kwamakhwapha.
Eyesibili ngeyabantu abajuluka kakhulu nabanukayo. Lolu hlobo kokubili lukhawulela umjuluko futhi luqeda iphunga elibi, luletha iphunga elilula nomuzwa ohlanzekile nokuzethemba kumsebenzisi.
Ungawukhetha kanjani umqulu osebenzayo we-deodorant wesilisa? Ukuqeda iphunga okuphumelelayo kufanele kufeze lezi zinhloso ezilandelayo:
Vimbela ukujuluka: Isiqedaphunga samadoda esisebenzayo asidingi nje kuphela ukuqeda iphunga elibi, kodwa futhi nokuvimbela umjuluko ekumanziseni indawo yamakhwapha.
Ayinaphunga, ayinambala, ayinatshwala: Imikhiqizo enalesi sakhiwo ayibangeli ukoma, ububomvu, ukulunywa kanye nokungakhululeki esikhumbeni. Ayilimazi i-epidermis yesikhumba, ngaleyo ndlela ivimbele amagciwane ukuthi angangeni, abangele izimbotshana ezivalekile, i-folliculitis, nokujuluka kube kubi kakhulu.
Isebenza amahora amaningi. Imikhiqizo esebenzayo yesiqedaphunga nayo idinga ukusebenza ngokuqhubekayo amahora amaningi, igwema isimo sokuthi amadoda ahlala eyongena endlini yangasese ukuze ayogoqa iphunga futhi, okuyinto ephazamisa kakhulu futhi ecasulayo.
Amarola angama-deodorant ayi-10 aphezulu adume kakhulu namuhla
1. I-Nivea Premium Men’s Deodorant Roller
Okuvame kakhulu umqulu wesiqedaphunga sabesilisa i-Nivea. Lo mkhiqizo ungowokudabuka eJalimane, owenziwe yinkampani iBeiersdorf. Lona umkhiqizo ovela kakhulu emakethe, ovame ukukhethwa amadoda uma benezinkinga zokujuluka kanye nephunga lomzimba.
Isithako: I-Aqua, Inorganic Aluminium Salt, Vitamin C, Persea Gratissima Amafutha, Glycerin, BHT…
Isebenzisa: Isiqedaphunga esisebenzayo samahora angu-48 nesinqanda ukujuluka, sishiya iphunga elimnandi elikhanyayo nokuzwakala okomile kwamaminerali.
Inzuzo: Umkhiqizo unephunga elimnandi lokukhanya elinomklamo ohlangene futhi oqinile. Ukusetshenziswa okuphumelelayo phakathi nosuku. Ayiqukethe ama-colorants, utshwala, ngakho-ke ayibangeli amabala ehembe futhi ibangele isikhumba esomile
Isici: Lapho isetshenziswa okokuqala, ivame ukuzwa i-greasy esikhumbeni, ukomisa isikhathi eside. Uma uzivocavoca usuku lonke futhi nenani lokujuluka liningi kakhulu, i-Nivea Deodorant Roller ayisebenzi ngempela.
Umkhiqizo uthandwa kakhulu ezweni lonke. Ungathenga ezitolo ezinkulu, ezitolo zokudla, emakhemisi nge-40,000 VND.
2. I-Rexona Men’s Deodorant Roller
I-Rexona ikhiqizwa uhlobo lwe-Unilever, okuwuphawu oludumile emhlabeni wonke lwenhlanzeko yomuntu siqu nemikhiqizo yokunakekela umzimba njenge-shampoo, ijeli yokugeza, isicoci sezandla, ukugeza ubuso, iphunga elimnandi,…
Isithako: Umkhiqizo onobuchwepheshe obuphambili uqukethe izigidi zezinhlayiya ezivimba iphunga elincane kanye nezingcaphuno ezivela kumakha emvelo ukuze unikeze umuzwa ohlanzekile, omusha usuku lonke.
Isebenzisa: I-antiperspirant esebenzayo amahora angama-48. Khanyisa futhi ithoni yesikhumba ngaphansi kwengalo, gcina iphunga elisha lezithako zemvelo ezibalulekile zamafutha.
Inzuzo: Gcina iphunga futhi uvimbele izithukuthuku zamadoda isikhathi eside, ezifanele abantu abakhuthele ngaphandle isikhathi esiningi nomfutho.
Isici: Imikhiqizo eginqikayo iqukethe usawoti omningi we-aluminium, ongabangela ukubola kwekhwapha uma kusetshenziswa amahembe amhlophe.
Irola yesiqedaphunga samadoda i-Rexona inenani elishibhile, elilungele ukusetshenziswa abantu abaningi.
Intengo esohlwini yomkhiqizo ezweni lonke i-60,000 VND.
3. I-Xmen .I-Deodorant Roller Yamadoda
I-X-men ingumkhiqizo okhiqizwa eVietnam ngokwezindinganiso zaseVietnam, ngakho-ke ilungele iningi labathengi. Imikhiqizo ithengiswa kakhulu kumakhemisi amaningi, izitolo ezinkulu, izitolo kanye nezindawo zokuthengisa eziku-inthanethi.
Isithako: Izingcaphuno zempepho nokhuni lwe-amber nezinye izithasiselo ziletha iphunga elimnandi lobudoda.
Ukusetshenziswa: Yehlisa ukujuluka, ivimbele ngempumelelo iphunga amahora angama-48. Bulala amagciwane futhi unciphise ukukhula kwamagciwane ezindaweni ezibucayi njengesikhumba ngaphansi kwengalo.
Inzuzo: Ayiqukethe ama-preservatives otshwala nezimboni, ngakho-ke ayenzi isikhumba somile, ayivali ama-pores, ayifaki izingubo.
Isici: Imikhiqizo egaywayo kufanele ithathe isikhathi eside ukuthi yome. Uma usebenzisa, udinga ukulinda ukuthi umkhiqizo wome ngaphambi kokuwugqoka.
Intengo yerola yesiqedaphunga samadoda engu-X ibhalwe ku-40,000 VND. Imikhiqizo iyatholakala kuzo zonke izitolo zezidakamizwa nezitolo ezweni lonke.
I-deodorant ye-AX yamadoda nayo ingumkhiqizo ophuma ku-Unilever brand. Ehlangene nomfowabo, u-Rexona, usephenduke umsizi ophumelelayo wokusiza amadoda aphinde abe nokuzethemba nesitayela lapho ebhekene nephunga lomzimba.
Isithako: Izithako zikhishwa emvelweni kanti amanye amakhemikhali aphephile emzimbeni njenge-Freesima Amafutha, i-Hydrolyzed Pearl, IGlycerine,…
Isebenzisa: Ivimbela ukujuluka kwamakhwapha, ivimbele ukukhula kwamagciwane, kubangele iphunga elibi.
Inzuzo: Sebenzisa ngempumelelo usuku lonke ngaphandle kokufafaza njalo. Isifutho esomisa ngokushesha, asinamathele ehembeni ukuze senze amabala. Kunezinhlobo eziningi zephunga ukuhlangabezana nezidingo zamadoda afuna kakhulu..
Isici: Kuthinta iphunga lamakha, isikhathi sokugcina iphunga asiside njengezinye izinhlobo.
Intengo ye-100,000 VND yesifutho se-deodorant engu-150ml ayiphezulu. Imikhiqizo ingatholakala kuzo zonke izitolo zezidakamizwa ezweni lonke noma amasayithi e-e-commerce ahloniphekile.
5. I-Romano deodorant roll yamadoda
I-Romano deodorant yamadoda ingumkhiqizo odumile we-Wipro Unza – inkampani yamazwe ngamazwe ehlinzeka ngemikhiqizo yokunakekelwa kwezempilo nobuhle emazweni angaphezu kuka-50 emhlabeni jikelele.
Isithako: Usawoti we-aluminium, Utshwala nezinye izinhlanganisela ezithambisayo.
Isebenzisa: Isebenza ukuvikela umjuluko nephunga lomzimba amahora angama-24.
Inzuzo: Iphunga lingowesilisa, alibangeli ukomisa kanye namafutha uma lisetshenziswa, Ivimbela amagciwane ukuthi axhumane nesikhumba ngaphansi kwezingalo, okubangela ukuvuvukala. Umkhiqizo unephunga elimnandi kuye ngokuthanda kwakho.
Isici: Iphunga linamandla impela lingadlula iphunga lamakha. Usawoti we-aluminium owandisiwe wenza amabala engutsheni, angasuswa ngolamula noma ngesoda yokubhaka ekugezeni ngakunye.
Imikhiqizo inenani elisuka ku-50,000 VND ukuya ku-70,000 VND kuye ngevolumu nohlobo lwephunga.
6. Enliven Men sika Deodorant Roller
I-Enliven Men’s Deodorant Roller ivela e-UK, yenziwe ngenqubo yokukhiqiza eqine ngokwedlulele enamazinga aqinisekisiwe ekhwalithi.
Isithako: Ikakhulukazi izithako zemvelo, akukho usawoti, akukho utshwala, azikho izinto zokulondolozwa eziyingozi esikhumbeni.
Isebenzisa: Ivimbela iphunga lomzimba kanye nomjuluko ngempumelelo amahora angu-16. Inikeza amadoda umuzwa wokoma nokuzethemba.
Inzuzo: Umphumela wokuvimbela iphunga mude impela, ulungele abantu abakhuthele kwezemidlalo futhi bajuluke kakhulu. Ayibangeli ukomisa kwesikhumba.
Isici: Lapho isetshenziswa okokuqala, ivame ukuzizwa inamafutha, idinga ukulinda ukuthi umkhiqizo wome esikhumbeni ngaphambi kokugqoka ihembe. Iphunga alihlukile.
Umkhiqizo unenani lama-200,000 VND ngebhodlela lama-75ml
7. I-Etiaxil Men’s Deodorant Roller
Isithako: I-Alcohol Dena, I-Hydrogenated Castor Oil, usawoti we-aluminium, amanye amafutha abalulekile, njll.
Isebenzisa: Ivikela umjuluko nephunga lomzimba amahora angama-48. Ukunciphisa amabhaktheriya ekuthintaneni nesikhumba okubangela ukuvuvukala kwama-pores, ukuthuthukisa isikhumba esimnyama ngaphansi kwezingalo.
Inzuzo: Umkhiqizo uyashesha ukomisa. Iphunga ligcinwa imizuzu yokuqala ye-30 kusukela ngesikhathi sokufaka isicelo, ngakho-ke alithinti iphunga lamakha amadoda.
Isici: Iqukethe utshwala, ngakho-ke ingabangela ukoma kanye nomuzwa omncane ohlabayo uma isikhumba esiveziwe sonakalisiwe, kodwa lo muzwa uzophela ngokushesha. Umkhiqizo ungase ubangele ukuphuzi kwezingubo ezinemibala ekhanyayo ngenxa yokuba khona kukasawoti we-aluminium.
Ukusuka ku-200,000 VND kuya ku-300,000 VND kumabhodlela amancane anomthamo we-15ml.
8. I-Deodorant Yamadoda E-Iroman
Isithako: Utshwala, i-Propylene ne-Aluminium Chlorohydrate nezinye izithako.
Isebenzisa: Ivikela ngempumelelo iphunga nokujuluka amahora angama-24. Idala ifilimu ukuze ihlukanise izici zangaphandle ezifana nomoya, uthuli, amagciwane ekuthinteni isikhumba.
Inzuzo: Ahlukahlukene ngamamodeli, izinhlobo, amakha anomklamo ohlangene, afanele ukunambitheka kwabathengi. Isebenza isikhathi eside ngephunga elihehayo lobudoda.
Isici: Ingabangela ukushintsha kwephunga.
Umkhiqizo unentengo engu-160,000 VND kuya ku-200,000 VND ngomthamo wama-50ml.
9. I-Garnier Men’s Deodorant
Isithako: I-mineral perlite nezinye izithasiselo
Isebenzisa: Ibamba iphunga amahora angu-48 ukuze ivimbele ngempumelelo ukujuluka komzimba.
Inzuzo: Ayiqukethe utshwala kanye nama-ejenti ombala wezimboni, ngakho-ke ayibangeli ukoma noma ukucasuka esikhumbeni. Ivumela amadoda ukuthi asebenze ngamandla esimweni sezulu esibi kakhulu.
Isici: Ayidumile emakethe. Imikhiqizo ayifani.
Ithengiswa kakhulukazi kumapulatifomu e-e-commerce amanani asukela ku-100,000 VND kuya ku-120,000 VND.
10. UCalvin Klein (CK) I-Deodorant Roller
Njengomkhiqizo odumile waseMelika, imikhiqizo ye-roller yesiqedaphunga i-Calvin Klein (CK) ithandwa kakhulu ngamadoda anamuhla.
Isithako: Imikhiqizo kawoyela ebalulekile yemvelo, ayinazo utshwala, ayinambala.
Isebenzisa: Lawula futhi uvimbele amagciwane abangela iphunga, futhi unciphise ukujuluka ngokweqile lapho amadoda ematasa noma esebenza. Umkhiqizo usebenza phakathi namahora angu-36.
Inzuzo: Iphunga lithambile futhi liwubukhazikhazi, amadoda angalisebenzisa esikhundleni seziqholo zansuku zonke. Idizayini yesimanje ehlangene kulula ukuyiphatha lapho uya emsebenzini, phuma. Izinhlobonhlobo zezinhlobonhlobo zenza kube lula ukuthi amadoda akhethe iphunga eliyintandokazi kakhulu. I-wax yoma ngokushesha ngaphandle kokushiya amabala.
Isici: Intengo ephezulu uma kuqhathaniswa
Imikhiqizo inenani elisuka ku-300,000 VND ukuya ku-330,000 VND ngebhodlela elingu-75g.
Ungayisebenzisa kanjani kahle i-roller yesiqedaphunga sowesilisa
Khetha umkhiqizo ofanele, kodwa amadoda adinga ukuwusebenzisa ngendlela efanele ukuze athole umphumela omkhulu. Landela lezi zinyathelo:
Hlanza ishawa, sula indawo yekhwapha, hlanza indawo yezinwele zamakhwapha njalo.
Jikela esikhunjeni sangaphansi kwekhwapha, bese ulinda imizuzu emi-3 ukuze uphinde uginqike ukuze umkhiqizo usebenze ngokugcwele.
Lindela ikhambi ukuze lome ngaphambi kokugqoka ihembe ukuze ugweme umkhiqizo ukunamathela ehembeni obangela amabala e-cosmetic.
Sebenzisa i-deodorant roll yamadoda Kuyasiza ngokufanele ukukhulisa ukusebenza kwe-deodorant, ukuvikela umzimba amahora amaningi wokusebenza okuqhubekayo.
Isiphetho: Ukwenza inkinga “yokuvuvukala kwephiko” ingabe isaba ukuthambekela kwamadoda, sicela uzikhethele imikhiqizo efanelekile emzimbeni wakho futhi uyisebenzise ngendlela efanele.
Xem Thêm Review Serum Balance Niacinamide Blemish Recovery có tốt không? | Muasalebang